Shariif Sheekh Ahmed | News From Somalia
Tag Archives: Shariif Sheekh Ahmed
Culimada Islaamka dalka Masar ayaa dood kulul ka yeeshay waxa loogu yeero xuquuqda dumarka taasi oo si aad ah looga hadal hayay maalmihii u dambeeyay dalka Masar.
Ururka la baxay Qaramada Midoobay ayaa dhowaan war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in dalka Masar oo ka mid ah dalalka Muslimiinta aanay ka jirin wax xuquuq dumareed ah taasi oo si weyn bulshada qaybaheeda kala duwani uga hadleen.
Culimada dalkaasi oo dood kulul ka yeeshay arinkaasi ayaa gaashaanka u daruuray warka Qaramada Midoobay waxaana ay culimadu sheegeen in Allaah SWT uu dumarka goor hore u soo saaray xuquuq uu isagu u jideeyay iyadoo wixii intaasi ka badanna ay tahay dembi iyo kalsoonidarro Allaah laga qabo.
Waxaa ay culimadu sheegeen in Allaah kitaabkiisu si dhab ah uga hadlay xuquuqda dumarka iyo ragga waxaana ay sheegeen in wax aan kitaabka ka ahayn aanay ka qaadanayn waxa ay tahay xuquuqda dumarka.
“Qorshaha gacan ku samayska ah ee xuquuqda dumarka lagu sheego waa mid loogu talo galay in si dhab ah loogu dumiyo diinta iyo dadka Muslimiinta ah” ayaa lagu yiri war ay soo saareen culimada reer Masar.
Dalal ay Masar ka mid tahay oo Carbeed ayaa la sheegay inaanay dumarku ku haysan xuquuqdii ay lahaayeen, waxaana UN oo warkan soo saartay ay sheegtay in dumarka dalal dhowr ah oo ay ugu daranyihiin kuwa Islaamka ay ku jiraan caburin xoogan.
Culimada dalkaasi Masar waxaa ay sheegeen in waxa UN-ku wadaan ay yihiin wax aan la aqbali Karin waxaana ay sheegeen in hadii warkooda la tixgeliyo ay dumarku noqonayaan kuwo yeelanaya xaqqa ninka ragga ah oo kale sida inay gaari wado umadda hogaamiso, amaba furto ninkeeda hadii ay is fahmi waayaan.
Culimaa`udiinka reer Masar ayaa qorshahan si aad ah uga digay waxaana ay bulshada caalamka iyo dalalka Muslimiinta ah ugu baaqeen inay ka digtoonaadaan qaadashada wax aan ka ahayn waxa diinta Islaamku qabto.
Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George W. Bush ayaa isku badalay farsha-niiste Eeyaha Sawira, wixii ka dambeeyay markii uu ka tagay Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka iyo Shariirf Sheekh oo Musikada tuma hada wuxuu aad u yaqaan aalada loo yaqaan BOONGAHA oo Shariif yaraantiisii garaaci jiray markii ahaa nin Digriga Suufiyada caan ka ahaan jiray waxa loo yaqaan XADRADA iyo muusikada lagu laro sida DAFKA.
Hadii aad raacdo sida gaalo wax u rabto waxaad gafaysaa sida ILAAH kuu rabo ama ay tahay inaad raacdo,ninkii quraanka iyo xadiista aqri jiray ayaa maanta meeshaas ku danbeeyay!.
HOOS KA FIIRI VIDEOGII CAANKA BAXAY EE SHARIIF MUSLIM IYO SHARIIF MURTAD!!
Shariif Shalay iyo Maanta Qeeybtii Koowaad
Siyaasiyiin horay ulasoo shaqeeyay Dowladihii ay waxa loogu yeero Beesha Caalamka Muqdisho ka dhiseen ayaa Muqdisho soo gaaray waxayna bilaabeen in ay qabtaan kulamo lagu dhaliilayo Xasan Garguurte.
Bayaan ka soo baxay kulanka Beesha ayaa lagu sheegey in xukuumadu ay talada Dalka gacanta u galisey koox gaara oo aan cidna tala la wadaageyn, waxay kaloo Beeshu sheegtey in awood Hay’adaha Dowlada gacanta loo galiyey dad gaara beeshana ay xaqeedii waydey:
Akhriso Nuqul ka mid ah Bayaanka
Shir ay soo qaban qaabiyeen siyaasiyiin ruug cadayaal lagu sheegay ayaa ka dhacay guriga Cali Mahdi ee Waqooyi Bari magaalada Muqdisho waxaana lagu weeraray Siyaasadda Xasan Garguurte ee Beesha Harti Abgaal ku wajahan iyagoona cammaareeyay.
Sheekh Cali Maxamuud Sheekh Cali Dheere ayaa shir ku sheegay in dowladaha Itoobiya iyo Kenya ay kala qeybsadeen dalka Soomaaliya.Sheekhu wuxuu farta ku goday in labada dowladood ay ku heshiiyeen in ay kala gumeystaan gobolada dhaca Koonfurta iyo bartmaha dalka Soomaaliya.
1-Dowladda Itoobiya ayaa lasiiyay in ay qaadato gobolada Bay,Bakool,Hiiraan,Galguduud iyo qeybo katirsan Gedo.
2-dowladda Kenya ayaa lasiiyay in ay gumeysato gobolada Jubbooyinka iyo qeyb kamid ah gobolka Gedo,Kenya waxay diyaarsatay shirkado shisheeye oo shidaal baarista qaabilsan iyadoona ceelal shidaal ka raadsanaysa dhulka Soomaaliya.
3-Uganda,iyo Burundi ayaa iyana lasiiyay Muqdisho iyo shabeelooyinka.
“Runtii cadawgu waa caddeeyay gumeysiga uu dalka ku hayo qof walba wuxuu akhrin karaa qodobadii kasoo baxay shirkii Addis Ababa ee labada dowladood ku kala qeybsadeen dalka Somaaliya”.
Wuxuu sheegay in Somaaliya ay gashay gumeysi lamid ah shirqoolkii Baarliin 1884,ee gumeystayaashu ku kala qeybsadeen dalka Soomaaliya ee hodonka ah.
Halkan ka dhagayso Shirka Jaraa’id ee Sheekh Cali Dheere MP3
Is Faham Heshiiseed Dhex Maray Kooxda Joint IGAD Committee, Cinwaana Looga Dhigay Xal U Helidda Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya.